शिक्षण अस्पतालका १३ डाक्टरसहित ७० जनामा कोरोना – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/शिक्षण अस्पतालका १३ डाक्टरसहित ७० जनामा कोरोना
काठमाडौं। महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालका १३ जना डाक्टरसहित ७० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप १७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या ७० पुगेको अस्पतालका कोभिड १९ फोकल पर्सन डा. सन्तकुमार दासले बताए
“अस्पतालका कर्मचारीको पीसीआर परीक्षणसँगै स्वास्थ्य सेवा समेत प्रवाह भइरहेको छ,” उनले भने, “बुधबार १७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। बिहीबार भने परीक्षणको रिपोर्ट आएन। संक्रमितको संख्या थपिने क्रम जारी छ।”
अस्पतालको इमरजेन्सी वार्डमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि केही दिन इमरजेन्सी वार्ड बन्द गरिएको थियो। तर, अहिले सुचारु भइसकेको उनको भनाई छ।
अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी नै कोरोना संक्रमित हुन थालेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अन्यौल छाएको बताए। अहिलेसम्म त चिकित्सक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर सेवा प्रवाह भइरहेको छ। अथ थपियो भने कसरी अगाडि बढ्ने अन्यौल छ। डा. दासले भने।
अस्पतालका कर्मचारीको स्वाब संकलन गर्ने क्रम पनि जारी रहेको र परीक्षणको काम पनि भइरहेको उनको भनाई छ। अस्पतालका चिकित्सक, नर्स, सरसफाई कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएका हुन्।
बालुवाटारमा पस्यो कोरोना: प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसहित ७६ जनामा कोरोना पुष्टि
काठमाडौ बासिलाइ भर्खरै आयो अत्यन्तै दुःखद् खबर !